vcd to mp3 converter — MYSTERY ZILLION
February 2008 edited September 2008 in File Request
vcd to mp3 ပြောင်းတဲ့ Free software ကောင်းတာလေးရှိရင် မစပေးကြပါဗျို့။ Link လေးပါထည့်ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးတင်လျက်.......:1:
SUPER သုံးကြည့်ပါလား။ portable ဖြစ်တယ်။ ဒီမှာ တစ်ချက် ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
It is useful software to convert
ကို citizen နှင့် ကိုဖုန်း ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
အိမ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာသီချင်းခွေအများစုက VCD တွေများနေတယ်..။ MP3 format နဲ့ 3gp format ပြောင်းပြီး ဖုန်းထဲ ထည့်ချင်တယ်ဗျာ ။
Full Version လေးနဲ့ Crack ပါ တခါထဲ ရနိုင်တဲ့ Software လေး ..လိုချင်လို့ ..ရှိနေတဲ့သူများ မျှပေးကြပါလားလေ...။
( Vista အတွက် Compatiable ဖြစ်နိုင်မဲ့ဟာလေး ) ။
အပေါ်မှာ ပြောကြတဲ့ Site တွေကို ဝင်ကြည့်တော့လဲ..ဘယ်ဟာက ဘာမှန်း သဲသဲကွဲကွဲ မသိလို့ ဗျာ ။ ( ညံ့လိုက်တဲ့ ငါနှော်...ပြောရင်းတောင် ရှက်တယ် ...အဟဲ ) ။
Software ကိုပဲ Full Version ရချင်တယ် ။ ရှိနေပြီးသား သူများ ဝေငှပေးကြပါ ။
May 2008 edited May 2008 Administrators
MP3 ကနေ Ringtone ပြောင်းတာလေးပါ။
ဒါကတော့ audio converter ပါ။
ဒါကတော့ video converter ပါ။
ဗျို့...Mr.exiter ကြီး.. ရေလည် အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထူးမပြောတော့ဘူးဗျာ ။
လပေါင်းများစွာ လိုက်လံရှာဖွေ စမ်းသုံးကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ ဆော့ဝဲတွေထဲမှာ ...ခုကျမှပဲ ..ခင်ဗျားပေးတဲ့ ဆော့ဝဲနဲ့ ...ရေထိပန်းလို လန်းဆန်းမွှေးကြိုင်...( ဟဲ ဟဲ....) အဆင်ပြေလေရဲ့ ။ အိမ်က VCD ခွေတွေ ကြည့်ကြည့်ပြီး MP3 ပြောင်းချင်နေတာ .....ဘယ်နှစ်ကမ္ဘာတောင် ရှိခဲ့ပြီလဲသိဘူး ...:D ။ လာလေစမ်း...အကုန် MP3 လုပ်ပစ်မယ်ကွ ။ :65: :65: :65:
အဟဲ ..ကို exiter ကြီး ....တကယ်လိုတာလေးတွေ ရှိသေးတယ်ဗျာ ။ အီဖေကိုယ် စက်မှာ ရက် ၉၀ trial ပေးထားတဲ့ Norton Internet Security အတွက် လိုင်စင်ကီးလေး ပေးနိုင်မလားမသိဘူး ။ ၂၀၀ရ ဗားရှင်းလားသိဘူး....။ စက်ဝယ်တာက ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာကဆိုတော့ ..၂၀၀ရ ဗားရှင်းပဲဖြစ်လောက်တယ်။ Kasperskey ဘက် မလှည့်ချင်သေးလို့...ရှိနေပြီးသား Norton Internet Security ကိုပဲ ဆက်သုံးချင်သေးလို့ ခင်ဗျ ။ ကူညီလက်စနဲ့ တပါထဲ ထပ်တောင်းအုံးမယ်..အဟဲ ... ( Microsoft Office 2007_ Student & Home Version လေးရဲ့ Product Key လေး ပါ လိုချင်သေးရဲ့ )။
ဖိုရမ်က Admin များ ..ဒီပို့စ်နေရာမှားနေရင် နေရာမှန်ကို ရွှေ့ပေးပါခင်ဗျာ..( မေးလက်စနဲ့မို့ ကိုexiter ကြီးဆီ ဒီကနေပဲ မေးလိုက်တာ..) ။ :65: :65:
ဒါက Microsoft Office 2007 ရဲ့ product key ပါ။
ဒါက Norton Internet Security ရဲ့လိုင်စင်ကီးလေးပါ။
ဗျို့exiter ... Norton လိုင်စင်ကီး ဖိုင်ကိုတော့ ဆွဲချ ထားပြီးပီ ။ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း အလုပ်ထဲမှာဆိုတော့ စက် က ပါမလာသေးလို့ မစမ်းရသေးဘူး ။ အိမ်ကျမှပဲ စမ်းတော့မယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အထူးကျေးဇူးထပ်တင်ကြောင်း အထူးမပြောတော့ဘူး ....အဟဲ ။
ဟို microsoft office 2007 ကီးကတော့ ...mediafire က ဟောဒီလို ပြောနေတယ်ဗျ ...( The file you requested was removed for violating MediaFire's Terms of Service or Acceptable Use Policy ) ။
သူတို့ အချင်းချင်း ဘာတွေညှိနေတာလဲ မသိဘူး.. exiter ရေ။
ရဘူးဆို မှ .....။
ဗျို့exiter .... အရင်လိုပဲ ..ဒင်းက ပြောနေတယ်... ( The file you requested was removed for violating MediaFire's Terms of Service or Acceptable Use Policy )...တဲ့ ။ အားတောင် နာလာပြီ....အဟဲ။
ဗျိုု့..exiter ကြီး....နော်တမ်လိုင်စင်ကီးဂျမ် ဇစ် ဖိုင်ကို Gmail ထဲ အတက်ချ်လုပ်ပြီး mail send ကြည့်တော့ ..ဂျီမေးက ခုလို ထအော် လေရဲ့ ...။ ဗိုင်းရပ်စ် ပါနေတယ်တဲ့..။
ရုံးက စက်မှာရှိတဲ့ avast နဲ့ scan တော့ မရှိဘူး။ Gmail က အော်တာက အောက်ကအတိုင်း...။ ( ဘာရယ် ဟုတ်ဘူး ...ပြောပြတာ ..သိအောင်လို့ )
One of your attachments containedavirus and could not be sent. Remove attachment and send.
... အလို... ရက်ပစ် ပါလား...။
အင်း..ရက်ပစ် ရက်ပစ်...ယုန်ကို ခေါ်တဲ့ ...ရက်ဘစ် သာဆို ...ပွတ်လို့ သပ်လို့ ကိုင်လို့ ရသေးရဲ့.... ခုတော့ ခုတော့ ....နင် နဲ့ ငါ နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ..ရက်ပစ် ရယ် ။
( ဗျို့...exiter ....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရစေချင်လို့ ...စေတနာထား တင်ပေးထားတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်း အထူးပြောတော့ဘူးရယ် ... လိုတော့လိုပါသေးတယ် ..စက်ထဲမှာ ရက် ၆၀ trial ပေးထားတော့...ပြည့်မှပဲ တမျိုး စဉ်းစားတော့မယ်...ကျေးဇူး ကျေးဇူး ...exiter ) :65: :65:
ဒီလောက်ဖြစ် ... ဒီကယူဟာ ...
http://www.mediafire.com/?oefvzzx9j12 ရော့အင့် ကိုအိပ်ဆစ်ဟာပြန်တင်ပေးတာ ..စမ်းကြည့်..
အလိုလေးလေး..... ကို exiter ရေ ့.... အိမ်ကစက်နဲ့ ဒီ နော်တမ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်ချပြီး နော်တမ် security နဲ့ ပဲ scan လိုက်တာ...ဗိုင်းရပ်စ်ပါနေလို့ resolve လိုက်တယ်တဲ့ ။ ကီးဂျမ်ဖိုင်လဲ မရှိတော့ဘူး ။ ဒုက္ခော ..... ( ငါ့နှယ်နော်........:(( ) ထပ်ရှာပေးကြအုံးလေး .......။
.....fileden နဲ့မှပဲ..ရှောရှော ရှူရှူ ....။
ဖိုင်ကိုရတော့တယ်...။ ဟို မီဒီယာဖိုင်းယား ကတော့....သူနဲ့ မိုက်ခရိုဆော့တ် ....ရန်ဖြစ်ထားတုံးတဲ့ ....။ ပေးဘူးတဲ့ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ..ကို DBA ကြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထူးပြောတော့ဘူးရယ်....။
စကားမစပ် ..ကို exiter ကြီး ....နော်တမ်ကီး တချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေးအုံး ရယ်......။
အဟဲ..... :65: :65:
ဒီ Key တွေကို သုံးကြည့်ပါလား konaung.
ဗျို့exiter ....ခုမှ About Norton Internet Security ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်တော့မှ...စက်ထဲက ဗားရှင်းက Norton Internet Security Version 10.1.0.26 လို့ရေးထားတယ် ။ ဆိုတော့ကာ.....(၂၀၀၆ ဗားရှင်းများလား..) .....အင်း အလကား ရချင်သုံးချင်တာလဲ ...ပင်ပန်းတာပဲ ..အဟဲ။:65: ( အပေါ်က ကီးတွေအားလုံး ထည့်စမ်းပြီးပီ..အကုန် invalid တွေပဲ )
VCD cuttter 4.04 is the best for video cutting and mp3 convertor from videos to MP3. It's respectable fact is very very fast to converting cutting to everything.